အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ အနာဂတ်က ဘာများပါလိမ့်? - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ အနာဂတ်က ဘာများပါလိမ့်?
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on October 7, 2014 at 16:15 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဘာသာဗေဒ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် David Crystal သည် သင်တန်းများပို့ချရန်အတွက် ရုရှားနိုင်ငံသို့ ရှောက်ရှိနေစဉ်တွင် မော်စကိုမြို့ရှိ လူသားများအတွက် ရုရှားနိုင်ငံတော်တက္ကသိုလ်၌ ပြုလုပ်သော ယူကေ-ရုရှား ဘာသာဗေဒ စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် သူသည် ‘အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားများ၏ အနာဂတ်’ နှင့် ကမ္ဘာအနှံ့တွင် အင်္ဂလိပ်စကားအမျိုးအစားများ ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲနေမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ တင်ပြချက်များကို ဗြိတိသျှကောင်စီ (ရုရှားနိုင်ငံရုံးခွဲ) မှ Keira Ives-Keeler က အောက်ပါအတိုင်း ကောက်နုတ်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
Advertising campaigns (ကြော်ငြာစာစည်းရုံးမှု လုပ်ငန်းများ) သည် ဘာသာစကားများ မည်ကဲ့သို့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲသည်ကို အတွင်းကျကျ ဖော်ပြပေးသည်
ကြော်ငြာများက ဘာသာစကားများ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲရာတွင် ဘယ်အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပြီးတော့ ဘာသာ စကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအသိ၏ ဆက်သွယ်ချက်ကရော ဘာများပါလဲ? လူသိများလှသည့် Heineken ၏ ကြော်ငြာဆောင်ပုဒ် ဖြစ်သည့် "Heineken refreshes the parts other beers cannot reach (Heineken က အခြားဘီယာများ မရောက်နိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများဆီသို့ လန်းဆန်းမှုပေးသည်)" ကို ဥပမာအဖြစ် အသုံးပြု၍ ဤကနဦးစာကြောင်းလေးသည် စကားလုံးများ၏ အပြောင်းအလဲဖြင့် မည်ကဲ့သို့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲသွားသည်ကို David Crystal က ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အနှစ် ၃၀ ကျော် ‘parts’ (အစိတ်အပိုင်း) ဆိုသည့် စာလုံးလေးကို ‘parrots’ (ကြက်တူရွေးများ) ‘pilots’ (လေယာဉ်မှုးမျာ) ‘poets’ (စာဆိုများ) စသည်တို့နှင့် အစားထိုးခြင်းဖြင့် ဤစာကြောင်းလေးသည် ကြော်ငြာစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်း အမျိုးကွဲပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ကို ပုံစံတူစာကြောင်းဖြင့် ကိုယ်စားပြုပေးပါသည်။
ကွဲပြားသည့် ယဉ်ကျေးမှုများကို သိရှိနားလည်ခြင်းဖြင့် ကွဲပြားသည့် ဘာသာစကားများကို နားလည်စေရန် အထောက်အကူပြုပေးသည်
David Crystal က ဂျပန်လူမျိုး အင်္ဂလိပ်စာဆရာများကို Heineken ၏ကြေငြာလုပ်ငန်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကိုရှင်းပြသည့်အခါတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အခက်အခဲများကို ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့သည် ယူကေသို့ လေ့လာရေးခရီးဖြင့် ရောက်နေသည့်အခိုက် ထိုကြေငြာကို လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုတွင် အမှတ်မထင် တွေ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆရာများ၏ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားခြင်းသည် ဘာသာစကားများကို နားလည်ရန်အတွက် ယဉ်ကျေးမှုကို နားလည်ခြင်းသည်လည်း အရေးကြီးကြောင်းကို မီးမောင်ထိုးပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
သူသည် နောက်တစ်ပတ်အကြာတွင် အမေရိကန်လူမျိုး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့် ၄င်းလမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်မှ ဖြတ်သန်းသွားသည့်အခိုက်တွင် ထိုကြေငြာ၏ ပြောလိုတဲ့ အကြောင်းရင်းနှင့်ဟာသကို ပြောပြရာတွင် ယခင် ဂျပန်ဆရာများအား ရှင်းပြရသကဲ့သို့ ထပ်တူကျသည့် စိန်ခေါ်မှုမျိုးကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။ မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောဆိုကြ သူများပင်ဖြစ်သော်လည်း တစ်ခါတရံတွင် မိခင်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသော စာကြောင်းများကို မိမိတို့ ကောင်းမွန်စွာ နားလည်နိုင်ရန်အတွက် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သိရှိထားရန် လိုကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ်သုံးနေသည့် ဘာသာစကားများကို ယဉ်ကျေးမှုက မလွဲမသွေ ပုံစံသွင်းပေးသည့် အတွက်ပင် ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌သာ ပြသသော ဤကြေငြာကို ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်း၌သာနေထိုင်ပြီး၊ ၄င်းကြော်ငြာနှင့် ထိတွေ့မှု ရှိသောသူများကသာလျှင် "refreshing the parrots that other beers cannot reach" ရဲ့ ရည်ညွှန်းချက်ကို နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဒေသများမှ လူများအတွက် ၎င်းစကားစုသည် အဓိပ္ပါယ်လုံးလုံးဖော်မရသော ပဟေဠိကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။
အင်္ဂလိပ်စာပုံစံသစ်များသည် လျင်မြန်စွာ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲနေသည်
၁၉၆၀ ခုနှစ် ၀န်းကျင်ရှိနှစ်များမှစ၍ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ နိုင်ငံများတွင် အင်္ဂလိပ်စကား အမျိုးပေါင်း ၆၀/၇၀ ခန့် ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ David Crystal က ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောသူ လူပေါင်းသန်း (၄၀၀) ခန့်ရှိ၍ ၄င်းကို ဒုတိယဘာသာစကား (second language) အဖြစ် ပြောသူ လူပေါင်းသန်း (၇၀၀ မှ ၈၀၀) အတွင်းရှိကြောင်း ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် လူပေါင်းသန်း (၁၀၀၀)ကျော်ခန့်ကလည်း ၄င်းကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကား (foreign language) အဖြစ် ပြောကြပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်စကားကို မိခင်ဘာသာအဖြစ် ပြောသူများနှင့် မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် မပြောသူများ၏ အချိုးသည် ၁း၅ ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားများ၏ သမိုင်းတွင် တစ်ခါမျှ မကြုံဘူးသော အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် လူများသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းကိုသာ အားမထားတော့ပါဟုလည်း အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ပြောနေကြသော အင်္ဂလိပ်စကားများ အနက် ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ်စကားသည် အနည်းစုသာ ဖြစ်ပါတော့သည်။
၁၅၀၀ နှောင်းနှစ်ပိုင်းတွင် ဥရောပခရီးစဉ်မှ ပြန်လာသော Earl of Leicester က "ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းခြေတွေကို လွန်သွားတာနှင့် အင်္ဂလိပ်စကားက အသုံးမ၀င်တော့ဘူး" ဟု ပြောခဲ့ပါတယ်။ Chaucer က "စာပေမရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကို ဘယ်သူကများ သင်လိုပါလိမ့်" ဟု ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထိုတစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲ ၁၅၈၅ မှ ၁၅၉၂ အထိ ပျောက်သွားတဲ့ Shakespeare က ပြန်ပေါ်လာပြီး သူ၏ အကောင်းဆုံးစာပေလက်ရာများကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုပျောက်သွားတဲ့နှစ်များအတွင်း Shakespeare က သူ၏ ပြဇာတ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မွမ်းမံနေပြီး ဇာတ်လမ်းများအတွက် အချက်အလက်များစုစည်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ လူအများက ထင်ကြပါတယ်။ နောက်ထပ် (၁၀)နှစ် ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ၁၆၀၀ ခုနှစ်များက သွားခဲ့တဲ့ Sir Walter Raleigh ရဲ့ လေ့လာရေးခရီးများမှတစ်ဆင့် "wigwam" နဲ့ "skunk" အစရှိသော အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စကားများက ရက်ပိုင်းအတွင်း အခြေချဝင်ရောက်လာပြီး လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။ ဘာသာစကားတစ်ခု ဆင့်ကဲပြောင်းလဲရန်အတွက် အချိန်သိပ်မလိုအပ်ပါ။ ဒီ"ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းခြေကို လွန်သွားတာနဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားက အသုံး မကျတော့ဘူး" လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ၄င်းဘာသာစကားကို ပြောသူအရေအတွက်ကတော့ နှစ်ပေါင်း (၄၀၀) အတွင်း လူပေါင်း (၄) သန်းမှ သန်းပေါင်း ၂၀၀၀ အထိ တိုးပွားခဲ့ပါတယ်။
ဘာသာစကားတစ်ခု၏ တိုးတက်မှုသည် ပြောသူတွေရဲ့ အင်အားကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေပါသည်
အထက်ပါ တိုးပွားမှုက ဘယ်လိုကြောင့်များဖြစ်လာရတာပါလဲ? အင်္ဂလိပ်စကားသည် အဘယ်ကြောင့် ဤမျှ လျင်မြန်စွာနဲ့ ဤမျှ မျှော်လင့်မထားလောက်အောင် ပွားများလာခဲ့ပါသလဲ? လူတစ်ချို့ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သဒ္ဒါမရှိသဖြင့် သင်ယူရလွယ်ကူသော ဘာသာစကားဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော ၄င်းသဘောထားကြားက David Crystal ရဲ့အပြောအရ ကမ္ဘအနှံ့ အင်္ဂလိပ်ကို ထောက်ခံအားပေးသူများလာရတဲ့အကြောင်း၏ နောက်ကွယ်မှာ ဒီထက်ပိုမို လေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှိလိမ့်မည်လို့ သိရပါတယ်။ ဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏ အစမှ ထင်ရှားသော နည်းပညာနှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများနှင့် သြဇာသက်ရောက်မှုရှိသော တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို အင်္ဂလိပ်စကားပြောသော တီထွင်သူ များထံမှ ရရှိခဲ့သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ စက်မှုတော်လှန်ရေးကာလအထိလည်းကောင်း၊ ထိုမှဆက်၍ ၁၉ ရာစုနှစ်၏ စီးပွားရေး အင်အားကြီးသောကာလနှင့် ၂၀ ရာစုနှစ်၏ ယဉ်ကျေးမှုအင်အားကြီးသောကာလအထိ အင်္ဂလိပ်စကားသည် ၄င်း၏ အဆင့် သာလွန်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူများသည် ထိုဘာသာစကားကို ၄င်းတို့၏ ဒေသအခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရအောင်ပြုပြင်ကြပါသည်
ကိုလိုနီနိုင်ငံနှင့် ကိုလိုနီနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ဘူးသော နိုင်ငံများတွင် အင်္ဂလိပ်စကားကို ဖိနှိပ်သူတို့၏ စကားအဖြစ် သတ်မှတ်သော နိုင်ငံများမှာတောင်မှ ထိုနိုင်ငံ၏ ရှုပ်ထွေးသော ဘာသာစကားများတည်ဆောက်ပုံကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို မကြိုက်သော်လည်းကို လက်ခံကြပါတယ်ဟု David Crystal က ပြောပါတယ်။ အကြောင်းရင်းမှာ လူတိုင်းက အင်္ဂလိပ်စကားကို ညီတူညီမျှ မနှစ်သက်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်စကားကို ရုံးသုံးအဖြစ် လက်ခံကြပြီး ဒေသ၏ အခြေအနေပေါ်မူ တည်ပြီး ပြုပြင်ကြပါတယ်။ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး လပိုင်းအတွင်းမှပဲ နိုင်ငံရေး၊ အစားအသောက်၊ ရှေးရိုးစဉ်လာနှင့်အပင်များနှင့် သက်ဆိုင်သော စကားလုံး အသစ်ထောင်ပေါင်းများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ် ၅၀ တွင်း မှာ ကမ္ဘာအနှံ့သုံး အဘိဓာန်တွေမှာ ၄င်းစကားလုံးများကို ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ထိုအဘိဓာန်တွေထဲ ဂျမေကန်စာလုံး ပေါင်း ၁၅၀၀၀ နဲ့ တောင်အာဖရိကစာလုံး ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ချည်းသက်သက်ပါဝင်ပါတယ်။
"Englishes" ဆိုပြီး အများကိန်းအရေအတွက်နဲ့ ဖော်ပြလေ့ရှိတဲ့သဘောကတော့ ဒီစကားလုံးတိုးပွားမှုဟာ လျော့နည်းသွားဖို့ မရှိပါဆိုတဲ့အကြောင်းကို ထောက်ပြနေပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဘယ်အရာမှ ထာဝရမတည်မြဲပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စကားဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံထားတဲ့ အများသုံး ဘာသာစကားအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိရန် ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်မလားဆိုတာ မည်သူမျှ မသိနိုင်ပါ။ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဆိုလျှင် နောက်ထပ် အင်္ဂလိပ်စကားတွေ ဘယ်နှစ်မျိုး ထပ်ပြီး ဆင့်ကဲ့ပြောင်းလဲလာဦးမှာပါလဲ? ကျွန်တော်တို့၏ ကျောင်းသားများ အထူးသဖြင့် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များကို ယဉ်ကျေးမှုအရ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေသော အနာဂတ်အတွက် မည်ကဲ့သို့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ပေးထားနိုင်ပါလဲ။
Blog.britishcouncil.org မှ Keira Ives-Keeler ၏ What's the future of English? ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by thinkhaingsoe on October 8, 2014 at 6:09
Yes to know the english language need to understand the english culture but myanmar's people isn't good in basic of english.
Permalink Reply by thinkhaingsoe on October 10, 2014 at 12:06
Permalink Reply by khin thandar oo on October 10, 2014 at 12:56
Permalink Reply by AshinDamahar Nanda on June 15, 2015 at 20:30
i think english grammar want.
Permalink Reply by htaylim on January 12, 2016 at 13:57
Permalink Reply by Zar Ma Ni on January 13, 2016 at 12:58
Thank you sir more knwo.